Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana an-dakozia - Ozinina fitaovana ao an-dakozia Sina
Fahazoana 1.20 Litera, vilany tsy vita amin'ny alim-pito vita amin'ny alim-by dia azo esorina miaraka amin'ny menaka mainty tsy miraikitra; Asa fanendrena (30-720 min); Sarom-baravarankely feno hafanana, miaraka amina tantana voapetaka; Satroka PP misy famehezana Silôna. Vatana lehibe misy takelaka fanafanana; lapoaly handrahoana, etona (akora Tritan). Fanavaozana ny rafitra fanamafisana mahatonga ny mari-pana milamina sy mitovy. Ary ny lapoaly fanendasana herinaratra dia hijanona tsy hanohy ny hafanana ary hihazona ny hafanana rehefa tonga any amin'ny setanao ny mari-pana, izay manampy anao mahandro sakafo tsara kokoa. Ary azo ampiasaina ho sakafo atoandro, mora harry.
Juice masticating miadana azo entina: ivon-tsakafo ho an'ny zanakao sy ny fianakavianao. Juice masticating miadana dia juiciet press cold, mavesatra ary maivana miaraka amin'ny famandrihana USB, ento fotsiny izy io, hahazo ranom-boankazo vaovao sy matsiro ary mahasalama ianao na aiza na aiza, na amin'ny raharaham-barotra, na fitsangatsanganana na an-trano. Sakano ny fitrandrahana oksizena, arovy ny famoahana otrikaina bebe kokoa ao anaty ranom-boankazo, manome anao ranom-boakafo mahasalama kokoa. Na ny pulp aza dia azo ampiasaina amina Jam, pickling lovia sy maro hafa.